SHACAB DIIFAYSAN IYO DAWLAD DIBAD JOOG AH
Dawlad la’aantu waxay ku bartaa qiimaha ay dawaldnimadu leedahay, taas ayaanan filayaa inay u sabab tahay weedha ay Soomaalidu beryahan dambe sida aadka ah ugu hal qabsato ee “dawlad xumi dawal la’aan bay dhaantaa”.
Taas macnaheedu ma ahan in dadka Soomaaliyeed ay raali ka yihiin inay hogaanka u qabato dawlad ku sheeg ku shaqaysa caddaalad darro, musuqmaasuq iyo caddaadinta bulshada, balse waa arin kuu muujinaysa sida ay ugu boholyoobeen nidaamkii dawladnimo ee 14kii sanno ee aan soo dhaafnay ka maqnaa.
Hadaba shacabka Soomaaliyeed iyagoo aan ku qanacsanayn natiijooyinkii shirkii dib u heshiisiinta ee Nairobi, ayay hadana soo dhaweeyeen dawaladdii shirkaas lagu soo dhoodhoobay, hase yeeshee niyadsamidaas iyo qalbi furnaantaas ay muujiyeen waxay u muuqataa mid maalinba maalinta ka dambeysa sii gudhaysa.
Dawladda FKMG ee Soomaaliya oo ay ku bohoobeen shaqsiyaad ay colaad, shaki iyo is aamin darro ka dhexeysay muddo dheer ayaa hadda u eg mid aan ka dhabayn karin ujeedooyinkii loo dhisay, iyadoo isla markaana cagta saartay dhabbihii guuldarra ee ay hore u mareen xukuumaddihii iyada ka horeeyay.
Dawaladdani waa isbahaysi aragti iyo ujeedooyin kala duwan leh oo dantu isku qasabtay, wax yaalaha mideeya ee ay heshiiska ku yihiina ay ka badantahay inta ay isku khilaafsanyihiin ee aanay ku heshiin karayn.
Waa isbahaysi uu loolan xoog lihi xubnihiisa u dheexeyay intii burburka ka dambaysay iyo xilligii uu socday shirkii dib u heshiisiintuba iyadoo shakhsiyaad miisaan leh oo ka dhex muuqda isbahaysiguna ay ku caan baxeen sannadihii aan ka soo gudubnay is rog rog badan iyo marba dhinac isku xaglin oo aanay lahayn mawqif loogu soo hagaago.
Waa isbahaysi ay ka buuxaan shakhsiyaadkii 14kii sanno ee aan soo dhaafnay dhibaatada weyn u geystay dadka iyo dalka Soomaaliyeed, iyagoo haddana weli u muuqdaan kuwo aan ka waantoobin siyaasaddahoodii dagaal ooganimo inkastoo ay markan xilal qaran dusha u riteen..
Waa isbahaysi aanay wax macno leh ula muuqan dastuurka iyo shuruucda ay samamysteen ajandahoodana aanay ku jirin waxa loo yaqaan tanaasul oo la’aantii ayna suurto gal ahayn dhinacyo is hayaa inay heshiis ku gaadhaan miiska wada xaajoodka.
Dawalad iyada dhexdeeda u baahan in loo qabto shir dib u heshiisiineed siday dad iyo dal tabaalaysan u samata bixin kartaa?.
Hadaba dhawr bilood ka dib markii dawladdaas la dhisay ayaa weli waxay soo dhaafi la’dahay magaalada Nairobi iyadoo ilaa haddana marti u ah wadanka Kenya ee gogosha u dhigay Soomaalida, halkaasoo weli hoteelada caanka ah lagu masruufo wasiiradeedii iyo xildhibaanadii inkastoo caddaadis iyo cabashaba ka muujiyeen Kenyaanku.
Waxaa markii ugu horeysay tan iyo intii ay xilalka qabteen booqasho ku tagay gobolo ka mid ah Soomaaliya madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha dawladda FGMG inkastoy ka maageen inay caasimadda tagaan.
Waxaa laga yaabaa in qofka Soomaaliyeed aanay wax yaab ah ula muuqan in madaxweynahoodu uu booqdo dalkiisa, hase yeeshee bal ka fakir haddii lagu odhan lahaa madaxweyne Bush oo booqday Maraykanka ama Xusni Mubaarak oo booqday dalka Masar.
Waxaan filayaa in weedhaha kor ku xusani u muuqdaan kuwo gurracan laakiin inagu waxaan maanta gaadhnay heer uu madaxweynaheenii uu booqdo wadankiisii isagoo dibbad joog ku ah wadan shisheeye, aaminsanna ciidamo shisheeye la’aantood in aanu dalka ku laaban karin!..
Arintaas aan kor ku xusnay ayaa sababtay muran iyo is maandhaaf ka dhex abuurma xubanaha dawladda gaar ahaan habkii ay uga haw geli lahayd Soomaaliya, goobtii dawladda xarunta u noqon lahayd iyo keenidda ciidamo nabad ilaalin oo Afrika ku deeqday.
Ku adkaysashada hogaamiye xookeedyada Muqdisho in dawladda ay ka hawl gasho Xamar iyagoo dhanka kale ka gaabiyay inay qaadaan tallaabooyinkii suurto gelin lahaa arintaa ayaa dadka badankiisu u arkaan qorsho ujeedadiisu tahay in lagu wiiqo awoodda dawladda ay xubnaha ka yihiin.
Xaaladda Xamar oo bilihii ugu dambeeyay soo jiidatay indhaha caalamka ka dib markii ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo lala beegsaday saraakiil ciidamada ka tirsanaa iyo aqoonyahano Soomaaliyeed oo ay weheliso dhacdadii dibadda loogu soo saaray maydadkii ku aasnaa xabaalaha Talyaaniga ayaa ahaa arimo sawir aan fiicnayn inaga siinaya khatarta iyo ammaan darrada ka jirta magaalada Muqdisho.
Maleeshiyooyinka hubaysan ee aan cidna ka amar qaadan iyo hanjabaadda ka soo yeedhaysa wadaadada mayalka adag ee fadhiisinada ku lah Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah dalka ayaa iyana ah airin aan la dhayalsan karin.
Ismaan dhaafka soo kala dhex galay shakhsiyaadka mihiimka ah ee dawladda iyadoo aan weli hawsheediiba bilaabin oo dalka dibaddiisa ku sugan ayaa ifafaale aan fiicanayn ka bixinaya mustaqbalka dawaldda iyo ku guulaysiga hawalaheeda.
Dawladdan oo shacabka badankiisu u arkayeen markii horeba abaal marin la guddoonsiiyay dagaal oogayaashii dalka iyo dadka dhibaatada u horseeday, halkii ay ka ahayd in sharciga la hor keeno ayaa aanay hadana shaqsiyaadkaasi weli ka toobad keenin falalkoodii dulaynta iyo ku danaysiga ummadda.
Hadaba xubnaha dawladda oo hadda u qaybsamay laba garab oo ka qaba aragti kala duwan keenista ciidamada iyo goobta ay dawladdu fadhiisin ka dhiganayso ayaa sababi karta guuldarro weyn oo soo wajahda dawladdan.
Sidoo kale shacabka ayaad moodaa iyana inay ku kala daba safan yihiin hogaamiyayaasha labadan fikraddood isku khilaafsan, waxaana xaaladdan aad uga faa’idaysanaya kuwa aan rabin in dalka nidaamkii dawladnimo iyo kala dambayntii lagu soo dabaalo oo iyaga aanay dani ugu jirin in nidaam dawladnimo dhasho maadaama ay hanti badan oo xaaraaan ahi soo gasho jeebkooda maalin walba.
Waxay kooxdani boodhka ka tumayaan fikradihii gaboobay ee ay ku caano maalayeen 14kii sanno ee aan soo dhaafnay ee ahaa iska hor keenista beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah iyo soo cusboonaysiinta colaaddii iyo dhibaatadii soo dhex martay sannadihii dawlad la’aanta iyagoo ku hadaaqaya erayo ay ka mid yihiin aargoosi iyo reer hebel baa loo danleeyahay.
Haya’adaha dastuuriga ah ee dawaladda ayaa iyana ay durtaba ka muuqataa kala daadsanaan iyo daciifnimo weyni, iyagoo isla markaana weli isla meel dhigi la’ qorshe iyo hawl gal midaysan oo u suurto geliya inay si dhakhso ah dalkii dib ugu laabtaan.
Waxaa wax lala yaabo ah go’aanka adag ee ay qaateen xubnaha beesha USC ugu jira xukuumadda iyo baarlamaanku kaasoo ina soo xasuusinaya gorgortankii iyo sidii ay hadba kooxi shirka uga dudi jirtay si loogu meel mariyo rabitaankooda xilligii uu socday shirka Soomaalida Kenya.
Sidee bay suurto gal u tahay in beel Soomaaliyeed ay keligeed go’aamiso in arrin baaarlamaanka lagaga doodi karo iyo in kale? Miyaanay ka fiicnaateen in ay rabitaankooda u maraan hab waafaqsan dastuurka iyo shaciga dalka?.
Dimuqraadiyadda iyo u hogaansanaanta tirada badan ayaad moodaa inay weli maskaxdooda geli la’dahay hogaamiye kooxeedyada Muqdisho, maadaama ay ahaayeen kuwo awood iyo amar ku taaglayn ku soo dhaqmayay sannadihii dawlad la’aanta iyo fawdada.
Baarlamaanka oo ah haya’adda sharciyeed ee dalka ugu saraysa ayaa iska leh go.aaminta haddii ciidamo shisheeye la keenayo dalka iyo haddii kale iyo weliba wadamada ay ka imanayaan ciidamadaasi iyadoo loo hogaansamayo rabitaanka inta badan.
Haddii uu xaalku sida uu hadda yahay ku sii socdo oo aanay xubnaha dawladdani dib isugu noqon kana fiirsan dhanka ay dhaanka u wadaan, shaki kuma jiro in ay meesha ku kala tegi doonaan iyagoon Nairobi soo dhaafin.
Qoraaladii hore ee Khaliil...
AKHRI: MAQAALADA DADWEYNAHA EE MAANTA. GUJI